Git Sangit News » बच्चाहरुलाई धेरै सुकिलो-मुकिलो बनाउँदा रोगी हुन्छन ? यो पढनुहोस,
बच्चाहरुलाई धेरै सुकिलो-मुकिलो बनाउँदा रोगी हुन्छन ? यो पढनुहोस,
बालबच्चालाई कसरी हुर्काउने ? अहिलेका आमाबुवा धेरै सचेत र सर्तक छन् । बालबच्चालाई कसरी खेलाउने, कसरी बोलाउने, कसरी ख्वाउने भन्ने विषयमा पनि चासो राखिरहेका हुन्छन् । तर, यस्तै चक्करमा परेर धेरै आमाबुवाले आफ्ना बालबच्चालाई आवश्यक्ताभन्दा बढी स्यहार-सुसार गरिरहेका हुन्छन् । बालबच्चालाई खुला रुपले हुर्कन दिनुपर्छ ।
तर, बालबच्चा राम्ररी हुर्काउने चक्करमा आमाबुवाले उनीहरुमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप एवं नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन् । जब बालबच्चा हिलो माटो खेल्न थाल्छन्, आमाबुवाले रोक्छन् । जब बालबच्चा घर बाहिर दगुर्न थाल्छन्, आमाबुवाले रोक्छन् । जब बालबच्चा हिलो-पानी खेल्न थाल्छन्, आमाबुवाले रोक्छन् । जथाभावी फोहोर खेल्न थालेपछि आमाबुवाले रोक्छन् ।
छोराछोरीलाई सुकिलो-मुकिलो राख्न खोज्छन् । तर, एक अध्ययनबाट के थाहा भएको छ भने, ‘जीवाणुमुक्त जीवनशैली’ को कारण बच्चामा केही प्रकारका क्यान्सरको खतरा बढिरहेको छ । हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीले शरीरमा रोग लाग्नबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ । बालकबाट जति जति तपाईं हुर्कदै जानुहुन्छ, तपाईको प्रतिरक्षा प्रणालीले थरीथरीका भाइरस एवं ब्याक्टेरियासँग लडेर, जितेर बलियो हुँदै आउँछ ।
अर्थात प्रतिरक्षा प्रणाली पनि शरीरसँगै विस्तारै विस्तारै बिकास हुन्छ । विज्ञका अनुसार सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनाले आफ्ना बच्चालाई जीवाणु एवं ब्याक्टेरियाको पहुँचबाट टाढा राखिन्छ । यसले बच्चा सफा त हुन्छ तर उनीहरुको प्रतिरक्षा प्रणालीमा जीवाणु एवं ब्याक्टेरियासँग लड्ने क्षमता विकास हुन पाउँदैन । सामान्यत जीवाणु भन्नसाथ रोग निम्त्याउने कारक मानिन्छ । तर, मानिसको स्वास्थ्यमा भने दुई किसिमको जीवाणु पाउन सकिन्छ ।
एक, खराब जीवाणु जसले शरीरमा अनेक किसिमको संक्रमण निम्त्याउँछ । अर्को चाहि ‘असल जीवाणु’ जसले प्रत्यक्ष रुपमा शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । एक शोध अनुसार आधुनिक एवं उच्च बर्गमा ब्लड क्यान्सर बढी पाइएको छ । यसको कारण यो हुनसक्छ कि, विलासी र सुकिलो-मुकिलो जीवनशैली यो रोगको कारण हो ।
जन्मिएको पहिलो बर्ष शिशु ‘असल जीवाणु’ र केही ‘खराब जीवाणु’को सम्पर्कमा रहन पाएन भने, उनीहरुको प्रतिरक्षा प्रणाली यस किसिमको भाइरससँग लड्नका लागि सक्षम हुँदैन । यही कारण जब अचानक बच्चा कुनै जीवाणुको सम्पर्कमा आउँछन्, जब उनीहरुको प्रतिरक्षा प्रणाली फेल हुन्छ र केही समस्या देखापर्न थाल्छ ।
बच्चलाई दिनभर घरभित्र बन्द गरेर नराखौं । बच्चालाई प्रकृतिको सम्पर्कमा लानुपर्छ । उनीहरुलाई घरबाहिरको दुनिया पनि देखाउनुपर्छ । बाहिरको हावा, माटो, पानी, वातावरण जस्ता कुरा बच्चाको स्वास्थ्यका लागि एकदमै जरुरी छ । मनसुनको समयमा थोरै सर्तकता अपनाउनुहोस् । प्राकृतिबाट भिटामिन एन मिल्छ, जो बच्चाको मानसिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । घामबाट भिटामिन डि मिल्छ, जसले हड्डीको विकासमा सघाउ पुर्‍याउँछ । बच्चालाई इनडोर गेमका साथसाथै, आउटडोर गेममा पनि प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । दही जस्ता पेय पदार्थले बच्चाको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति १४ माघ २०७६, मंगलवार १०:२४